Vaovao - Manangona ny fiainan'ny serivisy ny hose hydraulic
Ny fiainan'ny asa fanompoana ahose hydraulicny fivoriambe dia miankina amin'ny fepetra fampiasana azy.
Ny fivorian'ny hose ampiasaina dia tokony hojerena tsy tapaka raha misy mitete, kinks, blistering, abrasion, abrasion na fahasimbana hafa amin'ny sosona ivelany.Rehefa hita fa simba na tonta ny fivoriambe dia tsy maintsy soloina avy hatrany.
Rehefa misafidy sy mampiasa ianao dia afaka manitatra ny androm-piainan'ny fivoriambe amin'ny:
1. Fametrahana ny fivorian'ny hose: Ny fametrahana ny fivorian'ny hose hydraulic dia tokony hifanaraka amin'ny fenitra mifandraika amin'ny fitarihana sy ny fandaminana ny hose hydraulic mba hahazoana antoka fa ny fivoriambe hose dia ampiasaina araka ny tokony ho izy.
2. Fanerena miasa: Ny tsindry rafitra hydraulic dia tsy tokony hihoatra ny fanerena miasa amin'ny hose.Ny fiakarana tampoka na ny tampon'ny fanerena mihoatra ny fanerena miasa voaisa dia tena manimba ary tsy maintsy dinihina rehefa mifidy hose.
3. Fanerena faran'izay kely indrindra: Ny fanerena mipoaka dia voafetra amin'ny fitsapana manimba mba hamaritana ny antony fiarovana amin'ny famolavolana.
4. Ny mari-pana: Aza mampiasa ny hose amin'ny mari-pana mihoatra ny fetra atolotra, anisan'izany ny hafanana anatiny sy ivelany.Raha misy emulsions na vahaolana ny fluid hydraulic ampiasaina dia jereo ny angona ara-teknika mifandraika amin'izany.
Na inona na inona ny mari-pana miasa amin'ny hose, dia tsy tokony hihoatra ny mari-pana ambony indrindra atolotry ny mpanamboatra ranon-javatra izany.
5, mifanentana amin'ny ranon-javatra: fivorian'ny hose hydraulika anatiny sosona fingotra, sosona fingotra ivelany, sosona fanamafisana ary tonon-taolana dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny tsiranoka ampiasaina.
Tsy maintsy ampiasaina ny fantson-drano mety satria tsy mitovy ny toetra simika amin'ny fluid hydraulic mifototra amin'ny phosphate sy petrole.Hoses maro dia mety amin'ny tsiranoka iray na maromaro, fa tsy ny karazana fluid rehetra.
6. Ny halaviran-dava faran'izay kely indrindra: Ny hose dia tsy tokony hiondrika amin'ny ambany indrindra amin'ny haavon'ny fiondrika ambany indrindra, ary ny hose dia tsy tokony hiharan'ny fihenjanana na torque, izay mety hahatonga ny sosona fanamafisana amin'ny fihenjanana be loatra ary hampihena be ny fahafahan'ny hose hanohitra ny tsindry. ..7. Haben'ny hose: Ny savaivony anatiny amin'ny hose dia tsy maintsy mahazaka ny taham-pidirana ilaina.Raha kely loatra ny savaivony anatiny amin'ny tahan'ny fikorianan'ny tsirairay, dia hipoitra ny fanerena ranon-javatra be loatra ary hipoitra ny hafanana, ka manimba ny sosona fingotra anatiny.
8. Fandrindrana ny hose: Ny hose dia tokony ho voasakana, arovana na tarihina raha ilaina mba hampihenana ny mety ho fahasimbana noho ny fihozongozonana be loatra, ny fihozongozonana na ny fifandraisana amin'ny kojakoja mihetsika na zavatra manimba.Farito ny halavan'ny fantson-drano sy ny endrika iraisan'izy ireo mba hisorohana ny fahatapahan-jiro, ary hisorohana ny fifandraisana amin'ny zava-maranitra sy ny fanodikodinana mba hisorohana ny fivoahana.
9. Ny halavan'ny hose: Rehefa mamaritra ny halavan'ny hose marina, dia tokony ho raisina an-tsaina ny fiovan'ny halavan'ny tsindry, ny fihovitrovitra sy ny hetsika ary ny fivorian'ny hose.
10. Fampiharana hose: Fidio ny hose mifanaraka amin'ny fampiharana manokana.Ny fluid manokana na ny fampisehoana mari-pana ambony dia ohatra fampiharana izay mitaky fiheverana manokana amin'ny fampiasana hoses manokana.
Tena zava-dehibe ny fitadiavana mpamatsy tsara hiarahana miasa, raha mila fanazavana fanampiny momba anay ianao dia alefaso mailaka aho na avelao aho handefa hafatra.